ငါဘယ်ဘုံမှာလဲ??? | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ဆောင်းပါး » ငါဘယ်ဘုံမှာလဲ???
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 2:40 PM
Posted by မိုးသက် at 2:40 PM Read more
Qt October 11, 2012 at 4:23 PM
နှင့်မျှဝေဖေးမမှု ၊ အပြန်အလှန်ကူညီထောက်ပံ့မှုမရှိလျှင်.လူသားလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ပိုလျှံသလိုဖြစ်
တခါတလေ ဘယ်လောက်ဖေးမနိုင် မျှဝေနိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ခံရသေးတာ
တခါမှ မှန်ပြန်မကြည့်ဘူးဖူး.....အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် :))
ချစ်စံအိမ် October 11, 2012 at 4:23 PM
မောင်လေးရေဒိုင်ယာရီရေးတဲ့အကျင့်လေးကိုအရမ်းသဘောကျမိတယ်..အမအမေလည်းပြောတဲ့ကိုယ်လုပ်ခဲ့ကြုံခဲ့သမျှကိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ စာရေးတဲ့အကျင့်လုပ်ကြည့်ပါလားတဲ့အခုထိတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး သတိရရင်တော့ရေးလိုက်တယ် နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး.. လူဘ၀ဆိုတာရောက်ခဲ့လှတဲ့နေရာ နတ်ပြည်ထက်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးအသိပဲ..အကောင်းဆုံးတော့
နိုင်သလောက်လေးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ် မောင်လေးအကြံပေးသလိုလည်းမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကုိုယ်ကို မေးဖူးတယ် နင်ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ.. အခုပိုစ့်လေးကိုဖတ်လိုက်တော့သတိပိုရသွားတယ် ကျေးဇူးပါ
mstint October 11, 2012 at 5:20 PM
လောလောဆယ်တော့ တီတင့် ဒုက္ခဘုံကို ရောက်နေတယ်ဆိုရင် မမှားဘူးထင်တယ် နွေမိုးရေး)
ဒိုင်ယာရီထားတာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးလိုတဲ့အခါ အရေးပါတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့မြင်တယ်။
ကျောင်းတက်တုံးက တစ်ရက်မပျက်ရေးတယ် ပြန်ဖတ်တော့ လွမ်းစာရာ..ခုတော့ မရေးတော့ဘူး အိပ်လိုက်စားလိုက်ပဲ...အမှန်ဆို ကျုပ်က အတိတ်မေ့ချင်နေသူပါ ကျုပ်ခေါင်းကို အတိတ်မေ့လောက်အောင် လာရိုက်ခွဲပေးပါ အူးလေး ငမမ..တိန်
Sweety Snow October 11, 2012 at 9:21 PM
အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ကို လာဖတ်သွားတယ်မောင်လေးရေ.. နောက်လဲ များများဝေမျှရေးသားနိုင်ပါစေ
မြတ်နိုးသူ October 11, 2012 at 10:43 PM
စံပယ်ချို October 11, 2012 at 10:52 PM
“A CLEAR CONSCIENCE IS THE SOFTEST PILLOW ” “လိပ်ပြာသန့်ခြင်းသည် အနူးညံ့
ဆုံးသောခေါင်းအုံးဖြစ်သည်.. ” အရမ်းကြိုက်တယ် သဘောကျမိတယ် ကူးယူထားပါရစေနော်
Arëãl Thû October 12, 2012 at 1:59 AM
blackroze October 12, 2012 at 3:02 AM
မိုးသက် နင်ရေးထားတဲ့ ဒီပိုစ့်လေး ငါသဘောကျတယ်..
မိုးနတ်ကြယ်စင် October 12, 2012 at 6:31 AM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးကို တင်ပေးတဲ့မောင်လေးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
May Khin October 12, 2012 at 7:04 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 12, 2012 at 10:18 PM
ညိမ်းနိုင် October 13, 2012 at 12:36 AM
လောလောဆယ်တော့ လူ့ဘုံမှာနေတယ်...ညီရေ့..... ၊လူ့ဘုံဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကွကိုပဲ ခပ်သောက်ဖို့ကျိုး
စားမိသလို၊တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သူများကို တိုက်မိရဲ့....၊ဘာပဲပြောပြော ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 13, 2012 at 11:29 PM
လူတွေက တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ဖို့ မေ့နေကြတယ်
ဒီတော့ သူများအပြစ်ကိုမြင်ပြီး ကိုယ့်အပြစ်ကိုတော့ မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့
အင်း ချက်ခြင်း မှန်ပြေးကြည့်ဦးမှ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! October 14, 2012 at 10:57 AM
ပို့စ်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါလားမောင်လေးရေ.. အတွေးတွေ ဆင့်ကဲလို့ အများကြိးတွေးမိသွားတယ် .